I-China Modern Simple Oak White Style yaseJapan Idityanisiwe Igumbi lokuhlala leSofa Ifenitshala # 0027 yokwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Isimanje seOak White White Isitayile saseJapan esidityanisiweyo Igumbi lokuhlala Isofa Ifenitshala # 0027
Inombolo yomzekelo: Amac-0027
Ubungakanani: isihlalo esiphindwe kabini: 1370 * 750 * 840mm
Isihlalo esisodwa: 810 * 750 * 840mm
Izihlalo ezithathu: 1970 * 750 * 840mm
Indawo efanelekileyo: Igumbi lokuhlala, ihotele, isifundo
Ubusika nehlobo isofa-njongo ezimbini
Isakhelo esipheleleyo singeniswa ngaphakathi oki omhlophe, yonke ibhodi yesakhelo, uyilo lwenjongo-mbini ebusika nasehlotyeni, kukhululekile ukuhlala ngaphandle komqamelo, kwaye indawo epholileyo isezimpundu. Imigca ilula kwaye intle, kwaye inkxaso ilungile. Ibhodi nganye yeenkuni ipolishiwe ngesandla kwaye ubugcisa bufanelekile ukuqinisekisa ukungqinelana. Ukubuyela umva okuphezulu kuqinisekisa intuthuzelo kunye nokuphumla, kukunika olona lawulo lwesofa ...
Ukomelela okuphezulu kwesiponji
Ukomelela kwesiponji okugcweleyo, kugcwele ikhusini lesiponji elikumgangatho ophezulu, ilaphu lekhava yesihlalo lenziwe ngomqhaphu kunye nezinto zelinen ezihambelana nolusu, kwaye inyangiwe ngokunganyangeki, akukho bhola, akukho bumba, akukho kubuna, ukukhuhlana kwaye akukho static umbane. Isofa ehleli ubunzulu ihlolwe amatyeli amaninzi, kwaye ukuphakama okuhle kuyilelwe ngokwenzululwazi. Xa iindwendwe zisiza endlwini, i-backrest ingasuswa ukwenza ibhedi yethutyana.
Uyilo lomntu lweendawo zokubeka iingalo ezigobileyo
I-chamfer emile okwe-arc ifakwe ngesandla ukuze kuthintelwe ukungqubana, ukutyibilika ngaphandle kwebala, kwaye kudityaniswe sisakhiwo se-tenon-and-mortise, esiqinileyo nesomeleleyo. Isakhelo somthi oqinileyo, iinkuni zinzima, nokuba ungatsiba njani, isofa ayizukugungqa, inokuxhasa ukuma kwakho konke ngaphandle kokukhathazeka ngokuwa. Indawo yokubeka iingalo egobileyo ixhasa ngokugqibeleleyo izandla neengalo zakho, ikuvumela ukuba uphumle kamnandi zonke iindawo.
Ukujiya imilenze yesofa
Ikona nganye yesakhelo sesofa iphosiwe ukuba ijikeleze kwaye ibe mpuluswa, iyenze ukuba ibe bhetyebhetye ngakumbi, kwaye ayizukuchukumisa onke amalungu omzimba. Imilenze yesofa yenziwe ngezinto eziqinileyo kwaye zinzima ukubamba ubunzima buqinile. Umazantsi wemilenze yesofa ayityibiliki kwaye ayinxibi, ekhusela umgangatho wakho kunye nokwandisa ubomi besofa.
Ukususwa kunye nokuhlanjwa kwendawo yokuhlala esofeni
Uyilo lokuhlala olunokuhlambeka nolunokuhlambeka, ngenxa yoko awuzukuba naxhala ngococeko. Ubomi businika iimpawu zokuzola kunye nokuphumla, ukusasaza imo yokonwaba, kwaye ukonwaba kungazaliswanga kugcwalisa indlu entsha.
Imibala eyahlukeneyo yesitayile
Umthi okhethiweyo waseNyakatho Melika, izinto ezineminyaka eli-100 ubudala, ezinamandla oomatshini aphezulu, ukuthungwa okucacileyo, kunye nexabiso eliphezulu leenkuni. Iizilebhu ezinkulu zihlanganisene ngokuthe ngqo, zinemathiriyeli eqinileyo, yomelele kwaye yomelele.
Egqithileyo I-SUP paddle board color ehambelana ne-inflatable surfboard eneefins 0372
Okulandelayo: I-Sterner Pet Metal eyiNdlu ePhakamileyo yeZilwanyana eziViweyo ngeNdawo eyi-feeder 0244
Ibhedi yeSofa ekhululekile
Isofa esiliqili kabini
Iseti yeSofa yanamhlanje
Indawo yokulala esofa kunye nokuGcina
Sihlalo weSofa Ibhedi
Modern Wooden White Oak Solid Wood Coffee T ...
Iinkuni okuqinileyo sideboard yokugcina elula wit ...
Inkulumbuso yeNdlu yeNdlu eQinisiweyo yeBhedi yePet
Ikona yeOfisi sisakhelo esiqinileyo somthi ...
Iinkuni Solid ikhitshi kwikhabhinethi iimodyuli ndlwana ndlwana ...